Fanadiovana isaky minisitera :: Ho fantatra amin’ny jona ny ho avin’ ireo mpiasam-panjakana tsy ara-dalàna • AoRaha
Fanadiovana isaky minisitera Ho fantatra amin’ny jona ny ho avin’ ireo mpiasam-panjakana tsy ara-dalàna
Tombanana hitombo ireo very asa. Hiankina manontolo amin’ izay havoakan’ilay haitao ara- kajy mirindra (Logiciel) « Augure » ny ho avin’ireo mpiasam-panjakana sasany amin’izao fotoana izao. Amin’ ny tapatapaky ny volana jona 2019 no ho tapitra ny fe-potoana telo volana nampiasana an’io fitaovana io ka hivoahan’ny isan’ny mpiasam-panjakana raikitra.
Hiroso amin’ny fanadiovana isaky ny minisitera ny fitondram-panjakana aorian’ io vokatra havoakan’ny kajimirindra «Augure » io.
Voalaza fa: « hiankina amin’ny filàn’ny minisitera isanisany ny fitazonana na tsia an’ireo mpiasam-panjakana tsy raikitra ». Mba hisorohana ny gaboraraka sy ny fandanilaniam-poana ny volam-panjakana no antony hanao- vana an’io fanadiovana io.
Hatramin’izao, tsy mbola nisy mpiasam-panjakana raikitra voaroaka teo anivon’ ireo minisitera samihafa. Nanamafy izany ny minisitry ny Toekarena sy ny tetibolam- panjakana, Randriamandranto Richard, omaly. « Mpiasa an’arivony no miasa eo anivon’ ny minisitera ka ilàna fandinihana ny momba izany», hoy izy. «Na izany aza tsy maintsy hirosoana ny fanadiovana ny asam-panjakana. Efa toromarika nomen’ny Filoham-pirenena izany ary tsy maintsy tanterahina », hoy ihany izy.
Miara-miasa akaiky amin’ ny minisiteran’ny Asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy eo amin’ny fitantanana an’ity haitao ara-kajy mirindra (logiciel) « augure » ity ny minisiteran’ny Vola. Fantatra fa hiankina amin’ izao fanadiovana izao ihany koa ny fampiharana an’ilay fampiakarana ny karama farany ambany, indrindra ho an’ny mpiasam-panjakana.
Fifidianana solombavambahoaka :: Nitombo ny isan’ireo mpifidy nisoratra anarana